Mid ka mid ah kooxaha waa Weyn ee Yurub oo diyaar la ah £ 175m si ay u soo xero galiso Maxamed Saalax – Gool FM
(Yurub) 11 Feb 2019. Xidiga xulka qaranka Masar iyo Liverpool ayaa qeyb kasoo noqday qorshaha kooxda Juventus, kadib marka uu furmo suuqa kala iibsiga soo aadan ee xagaaga.
Wargeyska “Guardian” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda Juventus ay si weyn ugu fikireyso soo xero galinta Mohamed Salah, hadii ay dhacdo in kooxda uu ka dhaqaaqo Paulo Dybala.
Dybala ayaa qaadanaya xilli ciyaareed xun tan iyo bilawga xili ciyaareedkan, gaar ahaan tan iyo markii uu kooxda Juventus yimid Cristiano Ronaldo.
Xidiga reer Argantina ayaanan dhalinin wax ka badan 2 gool, 20 kulan uu kooxda Juventus kaga soo muuqday horyaalka Serie A xili ciyaareedkan, waxaana sidoo kale uu si weyn kaga carooday in uu kasoo muuqday kursiga keydka kulankii ay la ciyaareen Parma.
Hadaba wargeyska “Guardian” ayaa sheegay in kooxda Juventus ay isku diyaarineyso in Salah ay ka gudbiso qiimo gaarsiisan 175 milyan ginni, si ay u soo xero galiso marka la gaaro suuqa xagaaga ee soo aadan.